DHAGEYSO: Puntland oo dagaal ku qabtay Maxaabiis Al-Shabaab ah & Wararkii ugu dambeeyay – HalQaran.com
DHAGEYSO: Puntland oo dagaal ku qabtay Maxaabiis Al-Shabaab ah & Wararkii ugu dambeeyay
Galgala (Halqaran.com) – Warar ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya, in dagaal khasaare geystay uu ka dhacay deegaannada Galgala iyo Bali-Khadar ee gobolkaasi, waxaana halkaasi ku yaalla saldhigyo ay ciidamada Difaaca Puntland ay leeyihiin.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalkan uu yimid, ka gadaal markii Ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay lahaayeen Ciidamada Puntland.
Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa in uu ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan Ciidamada Puntland, halka Saddex kale ay ku dhaawacmay.
Taliyaha Ciidanka Kumaandoosta Puntland ee PMPF, Baari Salaad Axmed ayaa sheegay inay Ciidamada iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca xubnaha ka tirsan Ururka Al-Shabaab, isla markaana ay khasaaro gaarsiiyeen.
Baari Salaad Axmed ayaa sheegay in ilaa 10 dagaal yahan ay ka dileen Al-Shabaab, sidoo kalena ay nolosha ku qabteen Xubno kale.
Taliyaha Ciidanka Kumaandoosta Puntland ee PMPF ayaa hadalkiisa intaasi raaciyay in Ciidamada Puntland ay ku jiraan feejignaan la xiriirta amniga.
Si kastaba, deegaannada Buuraleyda ah ee Gobolka Bari ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay weeraro lagu qaaday Ciidamada Puntland, waxaana mas’uuliyada weeraradaas sheegta Al-Shabaab iyo Daacish-ta Soomaaliya.
Tags: Al Shabaab, Buuraley, Daacish, Dagaal ka dhacay gobolka Bari, Galgala, PMPF
AKHRISO: War-murtiyeedkii ka soo baxay Shirkii Dhuusamareeb 3 & Doorasho Ergo oo la aadayo?!